dayactir guryo kiro ah - Tenants Victoria
Mulkiilayaasha waxaa waajib ku ah oo ka hooseeya Xeerka Kiradda Deganaanshaha 1997 si loo hubiyo in guryaha ay kiro/ijaar soo baxay waxaa lagu hayaa in dayactir wanaagsan. Tani waxay sidoo kale khuseysaa meelaha la wadaago leedahay ama maamusho milkiile guri ah.
Haddii hanti aad kirada u baahan dayactir, waa inaad raacdaa tallaabooyinka ku xusan ee Xeerka Kiradda Deganaanshaha 1997 . Act wuxuu bixiyaa laba dayactir hababka kala duwan; mid ka mid ah deg-deg ah dayactir oo kale ee aan degdegga ahayn ama guud dayactir.
hawa qaboojiyaha (air-conditioner)
Eeg bogeynaa ku saabsan hagaajinta hawa qaboojiyaha (air-conditioner).
deg-deg ah dayactir
milkiile guri waa in ay fuliyaan dayactir deg-deg ah si dhakhso ah. Bilowga aad kireyste, milkiile guri ama real estate ee wakaalo waa inuu ku siiyaa lambar teleefon aad gaari karto on lacala dayactir deg-deg ah.
kor illa iyo hoos u baahan dayactir deg-deg ah
Xitta haddii aad u maleyso inay deg-deg tahay, sharciga sidaa maaha.
Haddii ay ku jirto liiska deg-deg ah, wac milkiile guri ama wakaalo isla markiiba. Xittaa haddii ay tahay saacaddo ka dib.
Xaqiiji inaad qorto taariikhda, waqti iyo wax kastoo aad ku sameysay inaad isku dayday la xiriirka iyaga.
Sawiro iyo fidiyoow ka qaad dhibaatooyinka
Haddii aysan si dhaqso leh ugu soo warcelinin waad bixin kartaa si aad u dayactirka loo sameeyo. Laakiin oo keliya haddii ay ku jiraan liiska deg-degga ah
Milkiilaha gurina waa inuu dib kuugu soo celiyaa 14 maalmood qiimo macquul ah illaa iyo $1800 marka la raaciyo GST – haddii aad u dirto rasiidka iyo ogeysiin qoraal ah.
Haddii aadan dooneyni inaad bixiso dayactirka, ama ay ka qiimo badan yihiin $ 1800, waxaad codsan kartaa haddii kale VCAT.
Iyo haddii ay tahay deg-deg dayactirka, VCAT waxay dhageysan doonaa dacwaddaada 2 maalmood ee waqti shaqo.
Histaajin bixinta kiradda! Hanna isticmaalin lacagtaada kiradda ku bixinta dayactirka.
Haddii aadan bixin kiraddaada, milkiilaha guriga waxay u badan tahay inuu isku dayo inuu guriga kaa saaro.
Ha sameynin dayactir shaqsi ahaantaada. waxaad ku dambeyneysaa bixinta inay iyaga mar kale sameeyaan.
Haddii dayactiradda la sameynin, ama haddii ay qaataan waqti dheer in lagu sameeyo, waxaad laga yaabaa inaad awood u lahaato ka helid magdhaw milkiilaha.
Urgent dayactir waxaa lagu qeexaa sida ku xusan Xeerka:
dillaac ah saqafka halis ah
cilad halis korontada
fatahaad ama waxyeelo daad daran
duufaan halis ah ama waxyeelo dab
failure ama burburka wixii adeeg muhiim ah ama qalabka ay bixiyaan milkiile guri ama milkiilaha biyaha, biyaha kulul, cunto karinta, kulaylinta ama dhaqidda dharka
failure ama burburka ee qalabka ama mudnaan la siiyo by milkiile guri ama milkiilaha in waxay keeni doontaa in xaddi weyn oo biyo ah la khasaariyey
ama burburka gaaska, korontada ama qaybinta biyaha
qalad halis ah in wiishka ama jaranjarada
gaf ama waxyeelo dhigaya dhismaha ammaan ahayn ama aan ka aamin
Haddii aad u baahan tahay degdeg dayactir, uma baahnid inaad u sheegto milkiile guri qoraal laakiin waa in aad isku daydo in aad la xiriirto milkiile guri ama wakaalo ka hor inta diyaarinta adiga kuu gaar ah, waayo, dayactir in la fuliyo. Ka dhig diiwaanka tallaabooyinka aad qaaday si aad u hesho milkiile guri ama wakaalo si ay u fuliyaan dayactir (tusaale liiska wicitaanada teleefoonka, emails, wakhtiyada iyo taariikhaha).
Haddii aad ma gaadhi karto ka milkiile guri ama wakaalo ama aadan innaba kuma ay si deg deg ah uga jawaabaan, waxaad samayn kartaa nidaamyada adiga kuu gaar ah u leedahay in ay dayactir sameeyey-ilaa kharashka $ 1800 (oo ay ku jiraan GST). Kharashka waa in uu macquul ah si waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si aad u hesho a xigashooyin yar. Si aad dib ugu heli lacagta, si ay u soo diri milkiile guri ogeysiin ah, ku tilmaamay ka dayactir lahaa oo uu falay iyo inta ay ku kici, oo ku soo lifaaq nuqul ka mid ah la helo dayactirka ama qaansheegta. Milkiile guri waa in aad dib u bixiso 14 maalmood helo ogeysiin gudahood. Si kastaba ha ahaatee maanka ku hayo in haddii aad diyaarsato degdeg dayactir in la sameeyo iyo kharashka ka badan yahay $ 1800 (oo ay ku jirto GST), milkiile guri waa kaliya qabsan ilaa $ 1800. Haddii milkiile guri uusan kuu soo celinayo 14 maalmood gudahood ah, waxaad codsan kartaa in VCAT ee Dalab ah in ay sidaa sameeyaan.
Haddii aadan awoodin inaad bixiso degdeg dayactir naftaada, dayactir ku kici doona in ka badan $ 1800, ama si fudud aadan heli karin milkiile guri in ay sameeyaan dayactir ah, waxaad codsan kartaa in Golaha Maamulka Xeer ilaalinta iyo bulshadda Victorian ee Dalab in milkiile guri uu leeyahay si ay u fuliyaan ah dayactir. Maxkamadu waa inay maqlaan codsiyada dayactir degdeg ah 2 maalmood oo shaqo gudahood.
Ha joojin kiro/ijaar ka milkiile guri ama aad kiro/ijaar lacag isticmaalaan si ay u fuliyaan dayactir. Haddii aad qaadato 14 maalmood ka dambeeya in aad kiro, milkiile guri aad adeegi kartaan oo leh 14-maalin Ogeysiin ka saarid.
aan degdegga ahayn (guud) dayactir
Haddii aanu dayactir ku haboon ma mid ka mid ah qaybaha loo qeexay sida ‘deg deg’ galay, waa in aadan diyaarin in ay u naftaada sameeyey haddii milkiile guri ayaa isku raacay in qoraal ahaan bixiso. Waxaa jira 3 tallaabo ee dayactir habka aan deg degga aheyn:
1. ogeysiin in milkiile guri
Qor wax dayactir guud in loo baahan yahay on ogeysiin ah in milkiile guri foom. ogeysiin Tani waxay wargelinaysaa milkiile guri in alaabta oo dhan aad ku qoran waa in la cusboonaysiiyey 14 maalmood gudahood.
Hubi in foom la hagaajiyaa milkiile guri iyo in aan guryaha dhabta wakaalo, inkastoo loo soo diri karaa milkiile guri daryeelka cinwaanka wakaalo ee. (Haddii aad tahay kireyste/ijaarte dadweynaha, aad milkiile guri waa Agasimaha Guriyeyntaah.)
Sii nuqul ka mid ah in milkiile guri ama wakaalo iyo sii nuqul naftaada.
Waxaad soo diri kartaa ogeysiin ee boostada caadiga ah ama email (haddii milkiile guri ama wakaalo ayaa oggolaaday in uu idin siinayo ogeysiisyada by email) laakiin waxaanu kugula talinaynaa in aad isticmaasho warqad diiwaangashan ama wuu soo gelin in qof si aad u caddeyn karto inay heleen. Hayso risiidhka fariinta aad. Haddii aad soo diri ogeysiin ah by email, waa in aad hubiso in ay tahay in cinwaanka email ugu magacaabay milkiile guri ama real estate ee wakaalo iyo haddii ay suurtogal tahay codsi rasiidka akhrin.
Haddii aad qorshaynayso in ay raadsadaan magdhaw ka milkiile guri ah, waa inaad soo dirta Breach of Duty ogeysiin waqti isku mid ah.
2. codsadaan Arrimaha Macmiisha
Haddii milkiile guri ayaa fuliyay dayactir 14 maalmood gudahood markaad hesho ogeysiin ah, ama uusan dayactir lagu sameeyey heer lagu qanci karo, waa in aad warqad u Xiriirka Macaamiisha Victoria si aad u codsato kormeer isticmaalaya “Request for dayactir Inspection ama Qiimaynta kiro/ijaar ‘foom (website Xiriirka Macaamiisha Victoria) .
kormeere kula soo xiriiri doona si aad u sameysato a time in ay baaraan hanti ah. Ka dib baaris ay la xiriiri kartaa milkiile guri ama wakaalo oo isku day xaajoon dayactir ah in la sameeyo. Kormeeraha waa in uu sidoo kale warbixin ka qoraan tilmaamay dayactir in loo baahan yahay oo aad ku siiso koobiga.
3. Maxkamada madaniga Codsi qoraaleed
Marka aad qabtid nuqulka warbixinta kormeeraha, waxaad ka dalban kartaa Golaha Maamulka Xeer ilaalinta iyo Bulshadda Victorian ee dhageysi ah. Waa in aad codsato 60 maalmood ka dib markaad hesho warbixinta gudahood, laakiin haddii aadan helin nuqul 90 maalmood gudahood waxaad ka dalban kartaa Maxkamada iyada. si aad Maxkamada madaniga Codsi qoraaleed lifaaq nuqulka warbixinta kormeeraha. Maxkamadda Dalab kartaa in milkiile guri ka fuliyaan dayactir ah.
keyd dhigista u qaaska ah kiradda
Haddii milkiile guri ay ku guul daraysato in ay fuliyaan dayactir ah waxaad ka dalban kartaa Maxkamada in ay bixiso kiro/ijaar galay Keyd dhigista u Qaaska ah Kiradda ilaa dayactir ayaa la dhameystiray. Tani waxay khusaysaa dayactir deg-deg ah oo aan degdeg ahayn labadaba. Sida caadiga ah Maxkamada ka dhigi doonaa oo kaliya Dalab ah bixinta si Keyd dhigista u Qaaska ah Kiradda marka milkiile guri ayaa ku guuldareystay in ay u hoggaansamaanDalab ah inay sameeyaan dayactir.
Waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay magdhaw haddii aad u xanuunsataan carqalad iyo / ama khasaaraha ama waxyeelo in alaabtaada sababtoo ah milkiile guri ku fashilantay in ay:
fuliyaan dayactir deg-deg ah si dhakhso ah
fuliyaan dayactir guud 14 maalmood gudahood
ilaaliyaan dhismaha ee dayactir wanaagsan
damage kaga yimid kirestayaal
Haddii dayactir loo baahan yahay sababtoo ah adiga ama qof in lagu casuumay in aad gurigaaga ka dhigay waxyeelo, waxaa laga yaabaa inaad bixiso dayactir iyo laga yaabaa in aad naftaada iyaga abaabulo. The milkiile guri ama wakaalo aad u adeegi karaan Breach of Duty ama ‘ogeysiin dayactir’ aad u baahan in la dayactiro waxyeelo 14 maalmood gudahood. Haddii aadan samayn, waxay kuu diyaarin karaan dayactir ah in la sameeyo oo kuu soo diri ogeysiin dheeraad ah oo sheegaya sida badan dayactir qiimaha iyo waxaa laga yaabaa inaad bixiso kharashka macquulka ah ee dayactir.
Haddii aadan ku bixin, milkiile guri ka dalban kartaa Maxkamada ee Dalab ah in aad sidaas sameyso. Waa ilaa milkiile guri ah si ay u caddeeyaan in aad adigu masuul ka waxyeelo iyo waxaa lagu siin doonaa fursad aad ku soo bandhigto kooxda sheekada aad. Xittaa haddii aad galin ku kalsoonaan, weli aad ka doodid kartaa lacagta waxay doonayeen sidii aan macquul ahayn ka fiirsaneysa Duugga cadaalad ah iyo jeexa, iyo qiimo dhaca.t
Haddii aad hesho ogeysiin dayactir, nala soo xiriir .
Soo saareen: Maajo 2017
Repairs | Somali | May 2017